Golaha Wasiirrada oo maanta ka doodaya xiisadda Baladweyne | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya – Golaha Wasiirrada oo maanta yeelanaya kulankii caadiga ahaa ee Khamiista ayaa la filayaa inay war ka soo saaraan xaaladda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan ciidamadii Gorgor iyo Haramcad ee shalay lagu daabulay magaalada.
Sida ay caddeynayaan xogo hoose, ajandaha shirka Wasiirrada ee maanta ayaa mudnaanta 1-aad lagu siiyay xasaradaha muddada ka aloosnaa Hiiraan, haddana yeeshay wajiga cusub, waxayna Xukuumaddu si rasmi ah ugu dhawaaqi doontaa in ciidanka dib loo soo celiyo.
Howl-wadeenno ka tirsan xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaa dhawaan KON, u sheegay in la magaacbi doono guddi heer Wasiirro ah, oo ka shaqeyay xal u helidda xiisadda Baladweyne, kuwaasoo uu hoggaamin doono Wasiirka Arrimaha Gudaha, General Muqtaar.
Guddigu, waxa ay si degdeg ah ugu ambabixi doonaan Baladweyne, si ay kulamo ula qaataan dadka degaanka, una hor istaagaan dagaal ka dhaca xarunta gobolka, oo hadda qarka u saaran inuu ka qarxo dagaal u dhaxeeya ciidanka Farmaajo iyo bulshada Hiiraan.
Golaha Wasiirradu, waxa digniin buuxda siin doonaan, saraakiisha hoggaamineysa ciidanka laga qaaday caasimadda, oo uu ku jiro taliyaha Ciidanka Lugta, Biixi, kaas oo ka shaqeynaya sidii Farmaajo u boobi lahaa kuraasta Golaha shacabka ee taalla Baladweyne.
Xogo hoose oo aysan KON xajiijin karin jirtaankooda, ayaa sheegaya in laga yaabo in maanta Golaha Wasiirradu shaqada ka raacdeeyaaan Biixi iyo saraakiil kale oo si cad ugu tuntay qodobka 16-aad ee War-murtiyeedkii GWQ, ee soo baxay 9 Janaayo 2022, kaas ciidamada lagu amaray in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha Siyaasadda.
Sarkaalka sida gaarka u hoggaaminaya ciidanka Gorgor ee la geeyay Baladweyne, oo lagu magacaabo, Maxamed Axmed Xirsi, ayaa qaraabo dhow la ah Biixi, wuxuuna ka mid ahaa saraakiil loo adeegsaday dagaalkii gobolka Gedo. Biixi iyo Xirsi, waxa ay ku heyb yihiin Farmaajo, waxayna ka shaqeynayaan boob doorasho.